Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaatid waxyaabaha ku saabsan Tadalafil - Buyaas
1. Waa maxay budada Tadalafil?
Budada Tadalafil (171596-29-5) waa daawo loo qoro oo lagu heli karo qaabab kala duwan oo afka ah sida kiniin iyo budo. Daawadan waxaa laga heli karaa suuqa iyadoo la adeegsanayo magacyo kaladuwan sida Adcirca iyo Cialis. Sidoo kale, tadalafil ayaa u jira qaabkiisa guud. Si kastaba ha noqotee, lagugula talin maayo inaad isticmaasho budada guud ee kor u qaadida budada maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay ka weydo dhamaan awoodaha dawooyinka asalka ah; sidaas darteed, waxaad ubaahantahay inaad taxaddar muujiso markaad iibsaneyso dawadan sida tadalafil. Hubso inaad iibsato foomka kor u qaadida saxda ah ee natiijooyinka wanaagsan. Dhakhtarkaaga ayaa kugu hagi doona sida iyo meesha aad ku iibsanayso budada Tadalafil oo tayo leh.
Tadalafil (171596-29-5) waxaa loo adeegsadaa magacyo kala duwan oo astaan ​​ah si loogu daweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan. Tusaale ahaan, Cialis waxaa badanaa loo adeegsadaa daaweynta daweynta unugyada erectile ama itaal darrida ragga iyo sidoo kale dhiig-karka 'prostate hypertrophy', oo badanaa loo yaqaan 'prostate prostate'. Dhanka kale, Adcirca, oo iyaduna ah astaan ​​kale oo kor loo qaadayo, ayaa loo isticmaalaa daaweynta dhiig karka sambabada. Adcirca waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo kartida jimicsiga ee ragga iyo dumarka labadaba ee qaba dhiig karka sambabada.
Had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa in la qaato dawadan iyada oo la adeegsanayo hagitaanka dhakhtarkaaga si looga fogaado inaad la kulanto waxyeelo daran. Si kasta oo aad ugu fududaato inaad u isticmaasho budada tadalafil ha qaadin adigoon marin baaritaan caafimaad. Kaliya maadaama dawadu u shaqeyneysay saaxiibkaaga, maahan wax toos ah ee kuu soo bandhigi doona natiijooyin tayo leh adiga. Jirka aadanaha waa kala duwan yihiin, waana sababtaas in dhaqtarkaagu u go'aansado qiyaasta saxda ah ee aad qaadaneyso ka dib markuu baarto xaaladaada caafimaad. Markii si qaldan loo isticmaalo ama loo diro, tadalafil wuxuu kuu horseedi karaa waxyeelo daran oo ay ku kici karto kharash qaali ah oo marmarka qaar gebi ahaanba aan la beddeli karin.
2.Sidee bay budada Tadalafil u shaqaysaa?
Budada Tadalafil waxay ka mid tahay dawooyinka ka tirsan heerka dawooyinka loo yaqaan 'phosphodiesterase type' 5 inhibitors (PDE5). Dhamaan daawooyinka ku jira fasalkani si isku mid ah ayey u shaqeeyaan isla markaana adeegyadooda caafimaad ayaa loo adeegsadaa si loogu daaweeyo ku dhawaad ​​xaalado caafimaad oo isku mid ah. Caadi ahaan, daawooyinka waxaa lagu kala saaraa kooxo kaladuwan oo loogu yeero fasallo. Kooxahani waxay ka kooban yihiin daroogo leh guryo isku mid ah kuwaaso si isku mid ah uga shaqeeya. Tadalafil wuxuu caawiyaa raaxada kaadiheysta iyo murqaha qanjirka 'prostate hyperplasia (BPH)' oo ay ka mid yihiin; Xanuun inta kaadida, kaadi kaadida iyo deg deg ah ama baahi joogto ah kaadi.
Dawadani waxay kaloo kordhisaa qulqulka dhiigga jirkaaga ee guska, taas oo iyaduna gacan ka geysaneysa helitaanka iyo haynta kacsanaanta. Tadalafil waxaa badanaa loo adeegsadaa daaweynta daweynta cillad la'aanta 'erectile dysfunction' ee ragga, laakiin waxay kaa caawinaysaa uun markaad kacdo galmo. Jidh diliddu waxay dhacdaa marka guska uu dhiig ka buuxsado. Kacsigu wuxuu dhacaa ka dib markii xididdada dhiigga ee mas'uul ka ah keenista dhiigga ay kor u qaadaan oo ay kor u qaadaan bixinta dhiigga halka kuwa loo xilsaaray inay dhiig ka saaraan heshiiska guska. Marka dhiigu ku ururo guska, waxay sababe kacsanaan. Daraasaduhu waxay muujiyeen sare u qaadida awooda in la helo kacsanaan adag oo waara inta badan ragga qaba cillad la'aanta 'erectile'.
PAH, dawadan ayaa dejineysa xididdada dhiigga ee sambabbadaada si ay u kordhiso socodka dhiigga, taas oo iyaduna hagaajinaysa awooddaada jimicsiga. Markaad qaadaneyso dawadan, waxaad markaa lahaan doontaa awood ku filan oo aad ku shaqeyso saacado badan isla markaana aad ku gaarto yoolkaaga waqtiga ugu gaaban ee suurtagalka ah.
3.Sida loo qaato budada Tadalafil?
Talada Medica ee ah inaad qaadatid budada tadalafil ugu yaraan 30 daqiiqadood ka hor intaadan naftaada gelin galmada. Daawada ayaa faa iido kuu yeelan doonta markaad cuntada ku qaadatid ama aadan cunin. Waa inaad qaadataa uun kor u qaadista kaliya marka aad rabto inaad galmo sameyso. Si kastaba ha noqotee, ragga jeclaan lahaa inay yeeshaan galmo iskiis ah wax ka badan saddex jeer ama in ka badan toddobaad gudahiis, ka dib waxay u aadi karaan qiyaasta daawada maalinlaha ah, oo ku timaadda laba qaadasho, 2.5mg iyo 5mg. Qiyaasta lagu taliyay in la qaato maalin kasta waa 10mg, laakiin markii aysan kugu filnayn, markaa daawadaadu waxay kordhin kartaa qiyaasta ilaa 20mg. Si kastaba ha noqotee, la tasho dhakhtarkaaga ka hor intaadan bedelin qiyaasta qaadashada si aad uga fogaato waxyeelada sare ee dawada soo kordhay ee budada.
Tadalafil waa in la qaataa hal mar XXX saac kasta. Markaad heli weydo kacdoonka aad filayso, ha ku darin qiyaas kale isla isla maalintaas. Waa wax iska caadi ah in isticmaaleyaasha tadalafil-markii ugu horreysa ay la kulmaan dib u dhacyo ku yimaad helitaanka natiijooyinka la rabay. Jirka bini’aadamka waa kala duwan yahay, sidaan horey ugu soo sheegnay qormadan. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay la kulmaan natiijooyinka budada tadalafil inta lagu jiro daqiiqadaha 24 halka kuwo kale ay la kulmayaan daahitaan. Si kastaba ha noqotee, dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan inaad qaadatid qiyaasta daawada illaa sideed maalmood ka hor intaadan go'aansan inaad qaadatid qiyaasta sare ama ikhtiyaarka daaweynta ka duwan.
Waa inaadan waligaa qaadin budada tadalafil dawooyinka kale ee eritile dysfunction ama kareemada. Sidaa daraadeed, u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad qaadanayso wax kale oo ah dawooyinka ED ka hor intaadan bilaabin qiyaasta kor u qaadistaada. In kasta oo ay jiraan noocyo kaladuwan oo kor u qaadis ah oo suuqa laga helo, sida sildenafil, Viagra, Spedra, iyo Cialis, waa inaadan qatar gelin inaad ku qaadato wax midkoodna kor u qaadida tadalafil; Waxay u horseedi kartaa waxyeelo daran. Halmar qaado hal jeer laakiin talobixinta dhakhtarkaaga. Ka sokow, haddii aad qaadatid daawo kasta oo nitrate ah si aad u daaweyso dhibaatooyinka wadnaha ama xanuun laabta ah sida isosorbide dinitrate, nitroglycerin, isosorbide mononitrate, iyo daawooyinka madaddaalada sida 'popers', waxaa sidoo kale lagula talinayaa inaad ka fogaato qaadashada budada tadalafil. Isku-darka kor u qaadida tadalafil iyo daroogada nitrate-ka ayaa kuu horseedi kara hoos u dhac aad u daran xagga dhiig karka.
Si aad u ahaato dhinaca nabdoon, u sheeg dhakhtarkaaga dhammaan daawooyinka aad qaadatid ama haddii aad ku jirtid wax daaweyn ah ka hor intaadan bilaabin qaadashada daawada. Haddii ay dhacdo inaad dareento kacsanaan xanuun leh, ama kacsigu wuxuu qaadanayaa wax ka badan saacadaha 4 sidoo kale isla markaaba u sheeg dawadaada. Feejignaan dheer ayaa dhaawici kara muruqyada guskaaga. Sidoo kale, haddii aad xasaasiyad u leedahay kor-u-qaadida cuntada, ha isku hallayn qaadashada oo u sheeg takhtarkaaga inuu kuu helo bedel badbaado leh. Tadalafil waa dawo aad u awood badan oo ku habsata cillad la'aanta, laakiin waa in si taxaddar leh leh looga taxadaraa si looga fogaado waxyeellooyinka soo kordha. Ku dheji qiyaasta daawada loo qoray si natiijooyin wanaagsan loo helo.
4.Budada Tadalafil ayaa Isticmaala
Caadi ahaan, budada tadalafil waxaa loo isticmaalaa daaweynta dhibaatooyinka shaqada galmada ee labka ah sida daciifnimada iyo cillad la’aan. Marka laga reebo xoojinta kicinta galmada, tadalafil wuxuu sidoo kale wanaajiyaa socodka dhiigga guska si uu uga caawiyo ninka inuu helo oo uu sii wado dhismo adag muddo dheer. Dawadan ayaa caan ku ah ka caawinta ragga in ay yeeshaan galmo muddo dheer. Isticmaalayaasha Tadalafil waxay ku raaxeystaan ​​dhagxan adag iyo dhaadheer. Si kastaba ha noqotee, daroogada waa in la qaataa kaliya hal jeer maalintii iyo daqiiqadihii 30 ka hor galmada.
Dhanka kale, budada tadalafil waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta calaamadaha benign prostatic hyperplasia (BPH). Daawadu waxay yareysaa astaamaha BPH sida durdur daciif ah, adkaanta bilaabida socodka kaadida, iyo kaadinta soo noqnoqda, gaar ahaan bartamaha saqda dhexe. Halkan korlafil ayaa kaa caawinaya adoo dejinaya kaadiheysta siman iyo murqaha qanjirka. Si kastaba ha noqotee, ha iibsan hana bilaabin inaad isticmaasho budada tadalafil xitaa haddii aad la kulanto astaamaha BPH ka hor intaadan galin baaritaan caafimaad. Xusuusnow in dawadu ay tahay inuu qoro xirfad yaqaan caafimaad had iyo jeer.
Dhaqtarku wuxuu kaloo u qoraa budada tadalafil shaqsiyaadka qaba dhiig karka sambabada (PAH). Tani waa xaalad meesha dhiig karkaagu ku badan yahay ee marinnadaada qaada dhiigga u keena sambabbada, oo horseedda madax wareer, neefsasho gaaban, iyo daal. Dad badan oo la xanuunsan xaaladdan ayaa ku adag inay sameeyaan jimicsi joogto ah. Si kastaba ha noqotee, warka wanaagsan ayaa ah in budada tadalafil ay door muhiim ah ka ciyaarto caawinta bukaannada PAH inay shaqadooda u qabtaan si deggan oo ay ku yareeyaan saameynta xaaladda jirka.
Si kastaba ha noqotee, tadalafil kama difaaci doono cudurada galmada lagu kala qaado, oo ay ku jiraan cagaarshowga nooca B, HIV, waraabowga, iyo jabtada, iyo kuwa kale. Dhamaantiin, hubso inaad leedahay galmo badbaado leh oo badbaado leh markasta. Haddii aadan hubin sida aad u ilaalinayso naftaada waqtiga galmada, waxaad isticmaali kartaa kondoomka caagga. Wixii macluumaad dheeraad ah, kala tasho farmashiistahaaga ama dhaqtarkaaga.
5.Qiyaasta budada Tadalafil
Qiyaasta daawada Tadalafil way kala duwanaan kartaa hal isticmaale ilaa mid kale, taas oo kuxiran sababta loo isticmaalay. Xaaladdaada caafimaad iyo sida jirkaagu uga jawaabo daroogada ayaa waliba saameyn ku yeelan doona qaadashadaada. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo qaddarka lagu taliyay ee hooseeya, kaas oo uu hadhow kordhin karo dhaqtarkaaga kadib qiimeynta horumarka daawada. Waligaa haku habeynin qiyaasta adigoon ku wargalin dawadaada maxaa yeelay waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo aad u daran ama aad ku guul darreysato inaad gudbiso natiijooyinka laga sugayo. Qiyaasta budada Tadalafil waa sida soo socota;
Qiyaasta Cudurka Naafada ee Dadka Waaweyn
Qiyaasta budada tan 'tadalafil' waxaa loogu tala galay ragga qaba dhibaatooyinka ay ku qabaan helida iyo joogtaynta kacsiga adag. Qiyaasta bilowga ah ee lagu taliyey waa 10mg oo ah in afka laga qaato hal mar maalintii ama daqiiqadihii 30 kahor intaanad gaarin ficil galmo. Haddii aadan la kulanto natiijooyinka, waa inaad sii wadataa qaadashada qaadashadaada daawada caadiga ah illaa sideed maalmood, ka dib u booqo takhtarkaaga si aad ula qabsato qiyaasta. Dadka qaar waxay la kulmaan daahitaan helitaanka natiijooyinka, qaasatan markii ugu horreysa ee isticmaaleyaasha tadalafil. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta waxaa loo kordhin karaa 20mg maalin kasta. Dayactirka qiyaasta budada tadalafil waxay u dhexaysaa 5 illaa 20mgs oo ay tahay in la qaado hal mar maalintiiba markii loo baahdo ama kahor galmada. Tadalafil ee loogu talagalay ED qiyaasta waxay kuxirantahay dulqaadashada shaqsiga iyo waxtarka. Qiyaasta ayaa si ka hoosaysa hoos loogu dhigi karaa adeegsadayaasha la kulma waxyeelada soo kordheysa xitaa ka dib markay qaadanayaan qiyaasta ugu yar ee 10mgs maalin kasta.
Isticmaalka budada ah ee loo yaqaan 'tadalafil budada' maalin kasta, qiyaasta bilowga ah ee afka laga qaato hal jeer maalintii waa 2.5mg waana in la qaataa waqti isku mid ah maalin kasta, iyada oo aan tixgelinaynin waqtiga waxqabadka galmada. Qiyaastaan ​​waxaa loo sameeyay isticmaaleyaasha jeclaan lahaa inay galmo yeeshaan saddex jeer ama in kabadan usbuucii. Halkan, qiyaasta dayactirku waxay u dhexaysaa 2.5 ilaa 5mgs maalin kasta waana in afka looga qaataa hal mar saacad walba oo ah 24.
Qiyaasta budada Tadalafil ee loogu talagalay Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) iyo kacsi kacsiga (ED))
Waxaad sidoo kale u qaadan kartaa tadalafil si aad u daaweyso laba shuruudood hal mar, taas oo u noqon karta war wanaagsan u adeegsadayaasha. Daaweynta guusha leh ee ED iyo BPH, qiyaasta lagu taliyey waa 5mg qiyaasta maalin kasta, oo ay tahay in afka laga qaato qiyaastii isla waqti isku mid ah. Halkan, uma baahnid inaad tixgeliso waqtigaaga galmada laakiin kaliya ku dhejinta tilmaamaha qiyaasta qiyaasta si loo gaaro natiijooyinka la doonayo. Qaado qiyaastaada ilaa takhtarkaagu kugula taliyo inaad joojiso ka dib markaad la socoto horumarkaaga dawada.
Budada Tadalafil Qiyaasta Dhiig karka dhiiga
Daaweynta guulaha ee dhiig karka, waa inaad qaadataa budada tadalafil 40mgs hal mar maalintii. Khasab kuguma ahan inaad u qeybsatid qiyaasta 40mgs maalin gudaheed ama xitaa inaad kordhiso ama yareysid qiyaasta.
Qiyaasta daawada dadka waaweyn ee loogu talagalay Benign Prostatic Hyperplasia
Daaweynta BPH, waa inaad qaadataa 5mgs oral tadalafil qiyaasta daawada hal mar maalinti waana inaad hubisaa inaad ku qaadatay ku dhawaad ​​isku waqti maalin kasta qiyaastii toddobaadyo 26. Dhakhtarkaagu wuxuu kaloo kordhin karaa ama yareeyn karaa qiyaasta daawada maalinlaha ah iyadoo kuxiran sida jirkaagu uga jawaabo qaadashada qiyaasta toddobaadyada ugu horreeya. Haddii ay jiraan waxyeellooyin dawooyin oo soo kordha marwalba la xiriir takhtarkaaga ka hor waqtiga xaaladdu ka sii xumaan.
6.Budada Tadalafil nuskeed nolosha
Budada Tadalafil nolosha badh Jirkaaga ku sii jirayaa illaa jimcaha 36 saacadood kadib qaadashada qaadashadaada. Taasi waxay ka dhigeysaa tadalafil inay u noqoto xulasho aad u wanaagsan macaamiisha badan ee raadinaya inay horumariyaan khibradooda galmada. Qaadashada daawada budada ah ee loo yaqaan 'tadalafil budada' maalin kasta ayaa kaa caawin doonta inaad hesho firfircoonaan iyo kacsiyo dhaadheer ka dib markaad qaadatid qiyaasta qiyaastii saddex ilaa shan maalmood isticmaalka ugu horreeya. Ragga aan si wanaagsan uga jawaabin qaadashada qiyaasta badan, qaadashada daawada maalinba maalinta ka dambeysa aad bey waxtar u yeelan doontaa. Qiyaasta qaadashada maalinlaha ah waxay ku habboon tahay bixinta ku dhawaad ​​horumarin muhiim ah xagga wadista galmadaaga.
Had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad qaadatid qiyaasta budada tadalafil hal jeer maalintii haddii aadan helin natiijooyinkana ha qaadan qiyaasta kale saacadaha 24 gudaheeda. Natiijooyinka budada Tadalafil ayaa daahi kara qaar ka mid ah adeegsadayaasha, laakiin taasi micnaheedu maahan inaad qaadatid xaddi dheeraad ah isla isla maalintaas. Isticmaalaha budada tadalafil marki ugu horaysay waxaa laga yaabaa inay la kulmaan dib u dhacyo qaar, laakiin waqti kadib waxay gaaraan kacsiga la doonayo.
7.Waxyeelooyinka budada Tadalafil
Inta ugu badan ee budada tadalafil waa dawo xoog leh oo ka caawineysa shakhsiyaadka daaweynta daaweynta xaalado caafimaad oo kala duwan, haddii si khaldan loo isticmaalo ama si xad dhaaf ah loo isticmaalo waxay kuu horseedi kartaa waxyeelooyin. Aqlabiyadda ee Waxyeelooyinka budada tadalafil waxa sababay si xun u isticmaalka iyo sida jidhkaagu uga jawaabo daroogada. Caadi ahaan, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ku guuldareystaan ​​inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka daawada xitaa ka dib qaadashada qiyaasta saxda ah. Isticmaalayaasha qaarkood ayaa waliba laga yaabaa inay la kulmaan waxyeellooyin ka yar kuwa kale. Qaar ka mid ah waxyeelooyinka caadiga ah ee kor u kaca kor u kaca ayaa laga yaabaa inay waqtigooda ku dhammaadaan, waana sida soo socota;
Madaxanuunku aad ayuu u badan yahay inta aad qaadanaysid budada tadalafil. Waxa kale oo aad la kulmi kartaa wadno xanuun, calool xanuun, lallabbo, biyobax, shuban, iyo qufac. Xanuunnada dhabarkaaga, caloosha, lugaha, ama gacmaha sidoo kale waxay caan ku yihiin isticmaaleyaal badan oo soo kordha. Sidii aan soo sheegnay, saameyntani waa inay baaba'aan muddo ka dib, laakiin haddii ay sii dheeraadaan intii la filayay inay ku wargeliyaan dhaqtarkaaga inay kaa caawiyaan inaad xal hesho. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in inta badan dhibaatooyinkaan kor loo qaado la xakameyn karo.
Waxa kale oo jira waxyeelo daran oo aad u baahan tahay inaad raadiso daryeel caafimaad isla markaaba aad bilowdo inaad la kulanto, waxaana ka mid ah;
Indho la’aan ama aragga oo lumaya marka la qaadanayo kor u kaca. Isticmaalayaasha qaarkood waxay bilaabi karaan inay dhibaatooyin la kulmaan aragtidooda markay bilaabaan qaadashada dawadan, oo markay dhacdo, wac takhtarkaaga waqtiga ugu gaaban ee ugu macquulsan.
Wixii isbeddel ah ee aragga aragtida ah waa in sidoo kale loogu wargaliyaa isla markiiba rugta caafimaad ee kuugu dhow ama daawadaada. Isticmaalayaasha qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adkaato soosaarista aqoonsiga midabada qaar, sida sheegashada farqiga u dhexeeya cagaarka iyo buluugga.
Dhibaatooyinka maqalka, dhegaha garaacista, luminta, iyo maqalka oo yaraada ayaa sidoo kale ah saameyn kale oo daran oo uu qofku la kulmi karo.
Guluf muddo dheer ah oo soconaya in ka badan saacadaha 4.
Xanuun xanuun iyo dawakhaad, maqaarka oo dilaaca ama finanka, finanka, finanka carrabka, indhaha, bushimaha, iyo wejiga.
Dhibaatooyinka liqitaanka liqitaanka ama neefsashada sidoo kale waa in si dhakhso leh wax looga qabtaa.
Ka gaabinta inaad u sheegtid dhaqtarkaaga waxyeellooyinka-sare ee sareeya waxay kuu horseedi kartaa xaalado aan laga beddeli karin mararka qaarkoodna waxay kuu horseedi kartaa dhimasho. Haka walwelin inaad la xiriirto xirfadleyda caafimaadka haddii aad la kulanto mid ka mid ah waxyeeladaas. Sidoo kale, ha ku sii wadin qiyaasta adigoon ogeysiin dawooyinkaaga sababta oo ah waxay kuu horseedi kartaa dhibaatooyin badan ama xaaladdaada way uga sii dari kartaa. Dhamaan waxyeelada kor u qaadida kacsan ayaa la xakamayn karaa, dhakhtarkaaguna wuxuu kugula talin doonaa si la mid ah ka dib markaad xaaladaada baartid.
8.Budada Tadalafil ee iibka
Budada Tadalafil for sale waxaa laga heli karaa suuqa ama dukaamada internetka ama farmasiyada jirka. Si kastaba ha noqotee, waad ka heli kartaa magacyo kala duwan oo magac leh sida Cialis ama Adcirca, iyadoo ku xidhan meesha aad joogto. Kani waa dawo dawo sharci ah oo xukumooyin badan leh, waana inaadan wax cabsi ah qabin markii aad haysatid, iibsaneyso, ama soo dejinaysid daawada. Wadanka Mareykanka, Tadalafil waxaa markii uguhoreysay lagu ansixiyay 2003 daaweynta erectile dysfunction, sanadihii la soo dhaafayna waxay cadeysay inuu waxtar leeyahay. Budada tadalafil waxaa lagu heli karaa garaamyo kala duwan iyadoo ku xiran qaddarka aad ugu baahan tahay in lagu daaweeyo xaaladdaada.
Adigu xor baad u tahay soo iibso budada tadalafil ama ku filan kaliya isticmaalkaaga hal maalin ama dhowr maalmood iyadoo ku xiran talobixinta dhaqtarkaaga. Waxaa jira alaabooyin badan oo iibiya budada tadalafil suuqa maanta, laakiin hubi inaad ka hesho soo saare sumcad leh iyo iibiya. Dhamaan iibiyaasha aad suuqa ku aragto maahan daawooyin tayo leh. Xusuusnow, natiijooyinka wanaagsan oo dhakhso leh; waa inaad isticmaashaa budada tadalafil tayo leh had iyo jeer. Waxa kale oo jira nooc guud oo ah budada tadalafil, oo laga yaabo inay lahaato xoogaa tayo ah oo laga yaabo inaanay awood u lahayn daaweynta xaaladdaada.
Xaaladda haddii aadan hubin halka ama sida loo helo budada tadalafil tayo leh, markaa ha ka baqin inaad la hadasho dhakhtarkaaga. Xirfadlayaasha caafimaadku waa dadka ugu fiican ee ku tusiya meesha aad ka heli karto dawooyinka ay kuu qoraan. Si kastaba ha noqotee, had iyo goor way fiican tahay inaad sameyso daraasaddaada si aad u ogaatid kuwa ugu fiican soosaaraha budada soo saare iyo alaab-qeybiyeyaasha kugu xeeran. Hubso inaad iibsato budada tadalafil oo si fiican u diyaarsan oo kuu fududayn doonta inaad kaydiso intaad ku sii wadeyso qiyaastaada.
9.Halkee laga iibsan karaa budada Tadalafil?
Adduunku waa isbedelayaa, oo si ka duwan maalmihii dambe, waad awoodaa iibso budada tadalafil khadka tooska ah uga hel websaydhka oo ka soo saar badeecadaada waqtiga ugu gaaban ee suuragalka ah. Waad geli kartaa bartayada adoo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah, kaniiniga, ama laptop ah oo aad amarkaaga ku sameysid raaxada gurigaaga ama xafiiskaaga. Bedel ahaan, waxaad wali ka heli kartaa budada tadalafil farmasigaaga deegaanka. Si kastaba ha noqotee, waxaan had iyo jeer kula talineynaa macaamiisheenna inay aad u taxaddaraan markii ay raadinayaan soo-saareyaasha budada tadalafil ee ugu fiican intarneedka ama jirka. Qaar ka mid ah kuwa iibiya daawada ayaa laga yaabaa inay hayaan alaabooyin tayo hooseeya oo ku fashilmi doona inay gaarsiiyaan natiijooyinka la doonayo ama kuu soo bandhigaan waxyeellooyin daran.
Samee baaristaada ku saabsan shirkadda aad u soo iibsaneyso budada tadalafil si aad u fahamto sida ay u shaqeyso. Sida ugu wanaagsan ayaa ah in la eego qiimeynta shirkadda iyo dib u eegista macaamiisha. Shirkad sumcad leh waxay lahaan doontaa jawaab celin wanaagsan iyo qiimeyn heer sare ah. Aqri khibradaha kala duwan ee macaamiisha oo u samee go'aan xog ogaal ah. Macaamiil faraxsan wuxuu had iyo jeer kula talin doonaa macaamiisha kale alaab-qeybiyaha, kuwa kuwa niyad jabsanina kama baqi doonaan inay muujiyaan niyad jabkooda. Ha degdegin markaad iibsanayso budada tadalafil, waqtigaaga qaado, oo barto bixiyeyaasha 'iyo sidoo kale soosaarayaasha laga heli karo suuqa. Dhakhtarkaaga ayaa waliba kaa caawin kara sidii loo garan lahaa iibiyaha sare ee kor u kaca ee agagaarka.
Annaga ayaa hogaaminaya iibiyaha budada tadalafil gobolka, waxaanan ka hor ciyaarnay ciyaarta sannado badan hadda. Waxaan u fidinnaa alaabada caafimaad oo tayo leh dhammaan macaamiisheenna sidoo kale waxaan sameyneynaa waqti ku gaarsiis ah adduunka oo dhan. Websaydhka isticmaale-u-habboon ayaa kuu oggolaanaya inaad sameyso dalabkaaga ilbiriqsiyo iyo meel kasta. Waxaad si sahlan ula wareegi kartaa shey ilaa mid kale boggayaga internetka. Alaabooyinkeenna caafimaad, sida budada tadalafil ayaa si fiican loo diyaariyey si looga fogaado wixii wasakh ah inta lagu jiro safarka sidoo kale waxay kuu fududeynayaan inaad kaydinta daawada. Si kastaba ha noqotee, waxaan had iyo jeer kula talineynaa dhammaan macaamiisheenna daacadda ah, inaysan bilaabin qaadashada daawooyinka annaga oo aan marin baaritaan caafimaad oo aan ka helin warqadda ku habboon xirfadlaha caafimaadka.
Wixii su'aalo ama walaac ah oo ku saabsan budada kor loo qaado, waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto wakhti kasta. Miiskayaga daryeelka macaamiisha awood u leh ayaa kaala hadli doona dhammaan arrimahaaga waxayna sidoo kale kaa caawin doonaan inaad amar ku sameyso aaladdayada. Kaydi budada carruurta kana fogee qiyaasta lagu taliyey si aad u hesho natiijooyin wanaagsan. Haddii ay dhacdo inaad la kulanto waxyeellooyin dhinaca dawooyinka ah, la socodsii dhakhtarkaaga wixii talo dheeraad ah iyo hagis.
10.Budada Tadalafil vs Sildenafil Budada budada ah
Labadan daroogood waxay ka tirsan yihiin fosfodestete-5 (PDE5), taasina waxay ka dhigan tahay inay ku dhawaad ​​isla shaqeeyaan. Budada tadalafil iyo budada sildenafil citrate waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ay wadaagaan, waxaana loo isticmaalaa in lagu daaweeyo daciifnimada iyo cillad la'aanta 'ragga'. Si kastaba ha noqotee, labada dawooyin waxay noqon karaan kuwo wax ku ool ah oo keliya marka isticmaaleyaashu kacdo. Markaad raacdo dhammaan tilmaamaha qiyaasta dawada, tadalafil iyo budada sildenafil citrate waxay kaa caawin karaan inaad gaadho kacsi kacsan iyo dheereyn.
Marka laga hadlayo waxqabadka, budada tadalafil waxay ku shaqeysaa gudahood 16 illaa 45 daqiiqadood ka dib qaadashada qaadashadaada. Dhanka kale, sildenafil waxay keenaysaa natiijooyin gudahood daqiiqadaha 30, iyo markaad qaadatid cunno dufan leh, waxay saameyn ku yeelan kartaa waxtarka daawada. Sidaa darteed, budada sildenafil citrate waa in lagu qaadaa calool madhan si natiijooyin wanaagsan loo helo. Ku dhawaad ​​dhammaan PDE5 waxay xakameyneysaa waxtarka waa isku mid. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo waxtarka sildenafil uu taagan yahay 84% iyo tadalafil ee 81%, rag badani waxay doorbidaan qaadashada budada tadalafil maxaa yeelay waxay leedahay saameyn muddo dheer oo dheeri ah.
Budada Tadalafil waa la qaadan karaa markii loo baahdo ama maalin kasta. Caadi ahaan, qiyaasta qaadashada maalinlaha ah ee barbaarinta ayaa ka yar intii loo baahnaa. Tusaale ahaan, 10mgs waa qiyaasta kor u qaadida didelafil kahor galmada. Mar haddii la qaado, saameyntu waxay socon doontaa illaa saacadaha 36. Dhakhtarkaagu wuxuu waliba kordhin karaa qiyaasta 20mg ama wuxuu u yareeyaa 5mg marka waxyeellooyinka aan loo dulqaadan karin. Qiyaasta maalinlaha ah, qiyaasta lagu taliyey qiyaasta budada budada ah waa 2.5mg oo loogu talagalay ED iyo 50mg marka la daaweynayo BPH. Isticmaalayaasha sidoo kale waxaa lagula talinayaa in aysan kordhinin qiyaasta daawada kor u kaca ah iyada oo aan la talin dhaqtarka si loo yareeyo waxyeelada.
Sildenafil citrate budada ah waa in la qaataa hal jeer maalintii iyo saacad ka hor intaadan galmo u galin galmada. Daawada waa in lagu qaataa si ku saleysan baahi, qiyaasta lagu taliyayna waa 50mgs, oo sidoo kale aad qaadan karto daqiiqadaha 30 ama afar saacadood ka hor galmada. Xaaladaha qaarkood, qiyaasta budada sildenafil citrate waxaa loo kordhin karaa 100mgs haddii qiyaasta 50mg uu ku guuldareysto inuu keeno natiijooyinka la doonayo. Dhakhtarkaaga ayaa waliba yareyn kara qiyaasta 25mgs haddii aad la kulanto waxyeelooyin aan loo dulqaadan karin. Sida tadalafil, budada sildenafil citrate waa in la qaataa hal jeer maalintii xitaa haddii aadan natiijada ku helin saacadaha 4.
Labada daroogood, markii si xad dhaaf ah loo isticmaalo ama si khaldan loo isticmaalo, waxay kuu horseedi karaan ku dhawaad ​​waxyeelo la mid ah sida biyobax, madax xanuun, iyo calool xanuun. Si kastaba ha noqotee, aragtida midabku waxay aad ugu xiran tahay budada sildenafil citrate. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in dhammaan waxyeelooyinka daawada labadaba la xakameyn karo haddii aad si dhakhso ah u raadsato daryeel caafimaad. Xor baad u tahay inaad la tashatid dhakhtarkaaga ama farmashiistaha si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan budada tadalafil iyo budada sildenafil citrate.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Soo bixitaannada cusub ee loo yaqaan 'phosphodiesterase-5' waxay horjoogsataa cudurrada wadnaha. Tijaabada Caafimaadka & Wadnaha, 16(4), e30.
Mostafa, ME, Senbel, AM, & Mostafa, T. (2013). Saamaynta tallaalka-hooseeya ee tabardarran ee koritaanka unugyada galka maqaarka ee jiirka sonkorowga. urology, 81(6), 1253-1260.
Kaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… & Ergün, H. (2015). Isbarbar dhigga saamaynta sildenafil systemic, tadalafil, iyo daaweynta vardenafil ee jiritaanka dillaaca maqaarka ee jiirka. Diiwaanka qalliinka caagga ah iyo qalliinka gacanta, 49(6), 358-362.
Porst, H., Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, A., & Viktrup, L. (2013). Saamaynta kor u qaadida cudurka kaadiheysta ee hoose ee calaamadaha kaadi mareenka sare iyo heerka kacsanaanta xubnaha galmada ee labada xaaladoodba leh: Falanqaynta xogta liidata ee laga sameeyay afar daraasadood oo daraasad la sameeyay, oo lagu xakameeyay 'placebo'. Jadwalka daawada galmada, 10(8), 2044-2052.